Raaxo & Hypoallergenic Pintuck Qurxin Cadaan leh Xiritaanka jiinyeer, Shiinaha Raaxo & Hypoallergenic Pintuck Qurxinta Caddaanka leh Soosaarayaasha Xiritaanka Jiinyeer, Shirkado, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
U Daboolka Daboolka SIPPER CLOSURE - Daboolka qanjirada jilicsan ee jilicsan ayaa soo bandhigaya xirmo qarsoodi ah oo qarsoodi ah oo qarsoodi ah, oo fududahay in qalbi-jabiyahaagu ka soo galo oo ka baxo daboolkan
CH NASHAAD BADAN OO QURUX BADAN Nashqad - Naqshad naqshadaysan oo raaxo leh ayaa leh farsamooyin qanjiid Style ah. Qanjirrada quruxda badan ee quruxda badani waxay u muuqdaan kuwo aad u qurux badan. Waa hab fudud oo casri ah oo lagu xoojiyo muuqaalka qol kasta.
● JILIF IYO RAAXO LEH - Daboolka pintuck duvet oo laga soo farsameeyay 100% qalab microfiber aad u jilicsan oo kaa caawin doona inaad diirimaad iyo raaxo aad hesho sanadka oo dhan. Daboolka daboolka ah ee loo yaqaan 'pintuck duvet' waxaa loogu talagalay isticmaalka DHAMMAAN-XILALKA.
Product Name Qurxinta & Hypoallergenic Pintuck Qurxinta White leh Xiritaanka jiinyeerka